▷ Sintomy maimaim-poana ny WhatsApp 2021 - VERSION farany - Androidsis | Androidsis
Android, araka ny fantatry ny maro aminareo, no rafitra fiasa be mpampiasa indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny fizarana mahatratra 80% amin'ireo finday avo lenta rehetra miasa ankehitriny, ny rafitra miasa Google (Abidia) no lohalaharana. Ity ny filàna sy laharam-pahamehana misintona WhatsApp ho an'ny Android (o download sangisangy, araka ny nolazain'ny zaodahy), ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malaza indrindra dia tsy tokony tsy teo amin'ireo rafi-pitantanana finday malaza indrindra eny an-tsena.
Noho izany, indray mandeha izahay dia te hampianatra anao izay rehetra tokony ho fantatrao WhatsApp ho an'ny Android ary ny fomba ahazoana tombony betsaka amin'izany.
1 Ahoana ny fomba fiasan'ny WhatsApp ho an'ny Android
2 Sintomy ny WhatsApp ho an'ny Android maimaim-poana
3 Sintomy ny WhatsApp APK
4 Dikan-teny WhatsApp hafa azonao sintonina
4.1 Sintomy ny WhatsApp Plus
4.2 Sintomy ny WhatsApp GB
4.3 Sintomy ny WhatsApp aero
4.4 Misintona WhatsApp mangarahara
5 Ahoana ny fanavaozana ny WhatsApp ho an'ny Android
6 Mametraka WhatsApp amin'ny takelaka Android
7 Ahoana ny fametrahana WhatsApp Beta maimaim-poana
8 Fepetra takiana ahafahana mametraka WhatsApp
9 Finday inona no tsy afaka mametraka WhatsApp?
Ahoana ny fomba fiasan'ny WhatsApp ho an'ny Android
WhatsApp dia mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo toa ny hafa rehetra. Ny tombony amin'ny WhatsApp na izay zava-baovao tamin'ny androny, dia ny fanararaotany ny bokintsika an-tariby mba hahafahana miresaka amin'ny mpifanerasera amintsika amin'ny fomba mora indrindra. Rehefa manomboka resadresaka ifandraisantsika aminay izahay, dia manararaotra ny WiFi na ny fifandraisana data aminay handefasana ny hafatra any amin'ireo mpizara azy ny fampiharana, aorian'izay dia handefa ilay hafatra miaraka amin'ny fampandrenesana "manosika" ho an'ny mpandray, ny fifandraisana nofidinay. Ny vaovao tsara dia hoe manokana sy mandeha tampoka ity fizotrany ity.
Sintomy ny WhatsApp ho an'ny Android maimaim-poana
Izahay dia tsy te-hanadino ny fotoana hampahatsiahivana anao fa fampiharana maimaim-poana tanteraka sy mandrakizay i WhatsApp. Ny rindranasa dia tsy misy dokam-barotra na vidiny hafa, azontsika atao ny mampiasa azy rehefa irintsika sy ny fomba tadiavintsika Mila mihazona izany tsotra fotsiny isika.WhatsApp APK ho an'ny Android amin'ny mpamatsy ofisialy rehetra, toa ny Google Play Store, na alaivo antoka fa hampidina WhatsApp for Android amin'ny teny Espaniola mivantana avy ao amin'ny tranokala whatsapp. Ny fidirana amin'ilay rohy teo aloha dia azontsika atao ny misintona WhatsApp ho an'ny Android mivantana, raha tsy mahatsapa ny misintona ilay rindranasa avy amin'ny Google Play Store izahay na inona na inona antony.
Sintomy ny WhatsApp APK
Ireo mpampiasa izay tsy te-hisintona WhatsApp amin'ny Play Store izy ireoSatria te hampihena ny fisian'i Google amin'ny findainy Android izy ireo, dia afaka mividy fivarotana hafa, izay ahafahan'izy ireo misintona ireo rindranasa amin'ny telefaona, ao anatin'izany ny fampiharana fandefasan-kafatra. Ao amin'ireo magazay ireo, ny format fisintomana dia APK.
Afaka mitodika any amin'ny fivarotana toa ny APK Mirror ianao, iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ity sehatra ity, izay anombohana ireo kinova samihafa amin'ny fampiharana fa ny zavatra tsara indrindra dia ny mampidina azy avy amin'ny tranokala WhatsApp ofisialy araka izay azonao atao jereo ato amin'ity rohy ity. Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny APK dia ny famoahana ireo kinova beta sy teo aloha fa raha tsy izany, raha tsy tester beta ianao dia tsy afaka hitsapa amin'ny telefaona.
Betsaka ny magazay izay ahafahanao misintona ny APK WhatsApp, fa ny APK Mirror dia iray amin'ireo malaza indrindra, ary koa iray amin'ireo fivarotana azo antoka indrindra. Rehefa manavao ny fampiharana ianao dia tsy maintsy maka ny APK vaovao izay natomboka tamin'ny tanana ary mankafy ny vaovaony.
Dikan-teny WhatsApp hafa azonao sintonina
Sintomy ny WhatsApp Plus
WhatsApp dia manana legiona mpampiasa manan-danja ao ambadika ao, maro amin'izy ireo no manana fahalalana mandroso momba ny fampandrosoana sy ny fandaharana. Ity no nahatonga ny fanovana renirano fanovana ny fampiharana WhatsApp, marina izany WhatsApp Plus, fanovana ny WhatsApp izay mamela antsika, ohatra, hanafina ny toetran'ny fifandraisanay maharitra, hampanjifa ny endrika na hanampy fiasa izay tsy ananany.
Sintomy ny WhatsApp Plus Mora dia mora izany, avy amin'ireo pejin-tranonkala misy ny rafitra novolavolaina dia afaka manararaotra ireo fiasa sy ny vaovaony rehetra isika.
Ireo mpampiasa Android dia afaka misintona an'ity kinova ity amin'ny findainy, mazàna mampiasa APK. Rehefa manavao ianao dia mila mametraka ilay kinova vaovao amin'ny tanana, satria ity kinova ity tsy nohavaozina tamin'ny alàlan'ny Google Play, satria mitranga amin'ny kinova mahazatra an'ny fampiharana.
Sintomy ny WhatsApp GB
Fantatra amin'ny anarana hoe GBWhatsApp, izy io dia mod hafa iray amin'ilay fampiharana fandefasan-kafatra. Izy io dia kinova novaina ahafahan'ny mpampiasa manova ny fiasa sasany sy ny fisehon'ny fampiharana amin'ny telefaona. Na dia fantatra indrindra aza ity kinova ity manampy amin'ny fanatsarana ny fampisehoana ny fampiharana amin'ny fomba mazava, mba hampiasana azy tsara kokoa.
Izy io dia kinova iray izay manome safidy manokana momba ny tsiambaratelo ihany koa, izay lafiny iray hafa manome lanja ny mpampiasa ary indraindray tsy azony ao amin'ny kinova mahazatra an'ny fampiharana. Izy io koa dia hamela ny fanovana ny interface, miaraka amina safidy fanamorana sasany ho an'ny mpampiasa.
Ity kinova an'ny fampiharana ity Afaka maka download ianao ity rohy, izay ahafahantsika mahazo ihany koa ireo kinova vaovao alefa, izay ampidirina ao aminy ireo asa vaovao sy fanatsarana isan-karazany. Averina indray, navoaka tamin'ny endrika APK ity ary tsy maintsy ampidinintsika tanana ireo kinova vaovao, satria tsy havaozina amin'ny alàlan'ny Google Play.
Sintomy ny WhatsApp aero
Mod WhatsApp iray hafa io, izay azontsika alaina amin'ny finday Android. Ity kinova ity miavaka indrindra amin'ny fiovan'ny hatsarana entiny, satria manova ny endrik'ilay fampiharana fandefasan-kafatra izy io, ary manao azy ho toy ny fampiharana hafa tanteraka. Izy io no zava-baovao na tombontsoa lehibe omena an'ity kinova novaina ity.
Toy ny amin'ny kinova hafa novaina amin'ny fampiharana, ny mpampiasa dia manana andiam-pandaminana ahafahany manaingo ny rindranasa. Azonao atao ny manova ny interface, ankoatry ny fananana a Safidy manokana momba ny tsiambaratelo, hamela ny fampiharana hifanaraka tsara kokoa amin'ny mpampiasa tsirairay rehefa mampiasa azy.
Ny APK an'ity kinova novaina ity azo alaina amin'ity rohy ity. Rehefa manavao ianao dia mila ampidino tanana ny APK vaovao tsirairay izay natomboka avy amin'ny WhatsApp aero hahafahana mankafy ny vaovao tafiditra ao anatiny.
Misintona WhatsApp mangarahara
Ny farany ny mods fampiharana dia aseho ho safidy milamina, madio, azo antoka ary mora ampiasaina. Betsaka ny safidy tsiambaratelo ao anatiny, izay mamela ny fametrahana ny haavon'ny tsiambaratelo ao amin'ireo vondrona na ny sakaizanao tsirairay izay natao tao amin'ilay fampiharana mihitsy. Io dia mamela ny fampiasana manokana sy azo antoka ny fampiharana amin'ny fotoana rehetra.
Izy ireo koa dia manome asa sasany toy ny afaka mandefa hafatra amin'ny isa rehetraNa dia tsy manana izany ao anatin'ny fandaharam-potoananao aza ianao dia manorata tarehin-tsoratra bebe kokoa amin'ny satananao na zahao ny sarin'ny piraofilin'ny olona nifandray. Izy ireo dia fiasa izay tsy hitantsika amin'ny kinova mahazatra an'ny rindrambaiko, noho izany dia omeny fampiasana bebe kokoa izy io, ka mahaliana kokoa.
Ny WhatsApp mangarahara APK dia azo sintonina amin'ity rohy ity. Toy ny ambin'ireo kinova novaina tamin'ny fampiharana, mila misintona tanana ny APK vaovao ianao isaky ny misy fanavaozana vaovao misy. Tsy nohavaozin'i Google Play toy ny kinova mahazatra an'ny fampiharana.
Ahoana ny fanavaozana ny WhatsApp ho an'ny Android
Raha te hahafantatra isika ny fomba fanavaozana ny WhatsApp, manana safidy roa miharihary isika hitazomana ny kinova WhatsApp vaovao ho an'ny Android.
Afaka mandeha any amin'ny mpamatsy fangatahana ofisialy isika, amin'nity tranga ity dia ny Google Play Store, ary rehefa tafiditra azy io isika dia hampitandrina antsika hoe iza ireo rindranasa misy ny fanavaozam-baovao, raha mahita WhatsApp isika dia tsy maintsy mitery fotsiny "fanavaozana" fa ilay fampiharana misintona ny dikan-teny farany misy ary apetraka ho azy.
Etsy ankilany, afaka mandeha mivantana any isika tranokala whatsapp, fampidinana ny WhatsApp .apk Azontsika atao ny mametraka azy avy ao amin'ny folder "downloads" antsika ary hanavao ilay automatique azy ho azy fa tsy ho very ny angona na ny resaka ifanaovana.
Mametraka WhatsApp amin'ny takelaka Android
Saingy tsy te hanana WhatsApp fotsiny amin'ny finday avo lenta Android isika, fa te hanana azy amin'izay alehantsika sy amin'ny fitaovana misy antsika. Izany no mahatonga ny fahafaha-mampiasa koa WhatsApp amin'ny takelaka Android. Ny mety omen'ny Android antsika amin'ity karazana tranga ity dia maro, ary ny maodely fametrahana ihany koa. Na manana takelaka Android misy fifandraisana SIM isika na raha WiFi fotsiny dia ho afaka hametraka WhatsApp mora foana isika.
Ny safidy voalohany dia ny mankany mivantana WhatsApp Web avy amin'ny takelaka Android, fa te handroso lavitra kokoa izahay, te-hametraka ny rindranay WhatsApp amin'ny takelaka Android. Mampalahelo fa ny tsy azontsika dia ny fananana nomeraon-telefaona mifandraika amina fitaovana roa miaraka, fa afaka manararaotra nomeraon-telefaona iray hafa, na virtoaly na tena izy, ny fananana WhatsApp amin'ny takelaka Android anay maimaimpoana.
Ahoana ny fametrahana WhatsApp Beta maimaim-poana
Ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza dia misy kinova beta azo ampiasaina. Misaotra an'io fa ho vitantsika andramo ny vaovao rehetra izay tonga tao amin'ny WhatsApp alohan'ny olon-kafa. Ary ity koa dia zavatra azontsika atao maimaimpoana. Tsy sarotra ny mametraka azy amin'ny findainao Android, mila manaraka dingana vitsivitsy fotsiny ianao.
Raha te-hanao izany dia mila miditra amin'ilay Pejy WhatsApp Beta, izay azonao idirana ity rohy. Eto dia tsy maintsy miditra ao amin'ny kaontinao Google ianao ary avy eo dia mila tsindrio fotsiny ilay bokotra "Tongava mpanandrana". Amin'izany fomba izany dia efa anisan'ity beta ity ianao.
Ny zavatra manaraka dia ny misintona ny kinova farany an'ny WhatsApp amin'ny findainao Android. Rehefa mampiditra ny mombamomba ny fampiharana ao amin'ny Play Store ianao dia ho hitanao fa miseho ny WhatsApp Messenger (Beta) ary etsy ambany no hilaza aminao fa efa mpanapa-kevitra ianao. Ny sisa hataonao dia ny manavao ny app. Araka izany, amin'ny manaraka hidiranao dia efa nataonao toy ny beta tester izany. Amin'izany dia ho afaka hizaha toetra ny vaovao rehetra tonga alohan'ny olon-kafa ianao.
Fepetra takiana ahafahana mametraka WhatsApp
WhatsApp dia iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra hitantsika amin'ny Android. Na izany aza, tsy ny mpampiasa rehetra manana rafitra fikirakirana finday no afaka mampiasa azy io. Araka ny misy fepetra takiana mba hametrahana azy. Fepetra takiana izay misy ifandraisany amin'ny kinovan'ny rafitra fiasa.
Toy ny amin'ny rindranasa hafa, rehefa tonga ny kinova Android vaovao, ny fanohanana kinova taloha dia tsy tohanana intsony. Izany dia mitranga amin'ny WhatsApp. Amin'ny anao, raha te hampiasa ilay fampiharana, dia mila manana kinova mitovy na avo kokoa noho ny Android 4.0. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manana kinova ambonimbony kokoa. Saingy, raha tsy manana izany ianao dia tsy ho afaka hampiasa ilay fampiharana.
Finday inona no tsy afaka mametraka WhatsApp?
Ny lafiny iray mifandray akaiky amin'ny teboka teo aloha dia ny lisitr'ireo telefaona izay tsy ho afaka mametraka WhatsApp. Matetika ny orinasa dia manavao ity lisitra ity matetika, mba hialana amin'ireo tsy ampoizina tsy mahafinaritra ho an'ireo mpampiasa. Misy telefaona maromaro izay tsy afaka mametraka ny fampiharana fandefasan-kafatra.
Nokia S40 Iray amin'ireo telefaona ireo, izay azonao ampiasaina hatramin'ny 31 desambra 2018. Noho izany, manomboka amin'ny 1 Janoary, dia tsy afaka mampiasa na mametraka ny rindranasa intsony ianao.
Etsy ankilany, ny sisa amin'ny telefaona izay manana Android taloha dia ampidirina ao. Ireo rehetra ireo modely misy Android 2.3.7 sy kinova taloha Azon'izy ireo ampiasaina ny fampiharana, hatramin'ny 1 Febroary 2020. Vantany vao tapitra io daty io, dia asehon'ny zava-drehetra fa hifarana ny fanohanana, na dia mbola tsy voamarina ofisialy aza izy io. Ka tsy ho afaka hampiasa izany amin'ny findainy intsony izy ireo.
Ivelan'ny Android, manana telefaona voakasik'ity tranga ity ihany koa izahay, izay tsy afaka mampiasa WhatsApp. Modely misy Windows Phone 8.0 ary ny kinova taloha dia tsy mahazo miditra amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra intsony. Tsy afaka mampiasa azy intsony koa ireo manana BlackBerry OS sy BlackBerry 10. Io lisitra io dia mihanaka mandritra ny volana maro, noho izany azo antoka fa misy anarana vaovao hanampy azy. Raha te-ho vaovao amin'ity lisitra ity ianao dia afaka jerenao amin'ny tranokalan'ny fampiharana, ity rohy.